6 apetaho sosona HDI PC misy sosona rehetra China Manufacturer
Description:HDI PCB miaraka amin'ny 0,09 Mm Holes,HDI PCB Izay misy Lapera,HDI PCB Stackup
Home > Products > HDI PCB > 6 apetaho sosona HDI PC misy sosona rehetra
6 apetaho sosona HDI PC misy sosona rehetra
Biraon'ny HDI PCB (High Density Interconnector), izay conputur conputility avo dia avo, dia board circuit PCB izay manana fanapariahana avo lenta amin'ny alàlan'ny teknolojia bitika-joro-fandevenana. Ny birao HDI PCI dia misy ny faritra misy ny takelaka anatiny sy ny foiben-drindrina ivelany, ary avy eo dia mampiasa ny fanodinana, metallisma ao anaty lavaka ary fomba fiasa hafa hanaovana ny fifandraisana anatiny isaky ny sosona siramamy.
5.Mini hole: 0.075mm
7.Mini sakany / habaka: 0.2mm / 0.2mm
Mpanjifa marobe (indrindra ho an'ny mpamorona sasany) no tsy tsara amin'ny fizotran'ny famokarana, na dia tsy afaka mamorona rakitra gerber marina aza izy ireo amin'ny haino aman-jery EDA.Misy traikefa be ao amin'ny indostrian'ny PCB, ireto misy torohevitra vitsivitsy ho anao.7 * 24 fanohanana an-tserasera ankoatra ny Shinoa Taona vaovao.
10.Mampandehona amin'ny singa an-trano
Manana singa maro eto an-trano izahay, izany no hamonjy fotoana sy vidiny amin'ny totalinao.
8 sosona TG170 1.6mm manga birao HDI mivarotra Contact Now
6 apetaho sosona HDI PC misy sosona rehetra Contact Now
HDI PCB miaraka amin'ny 0 09 Mm Holes HDI PCB Izay misy Lapera HDI PCB Stackup PCBA miaraka amin'ny UL Birao PCB miaraka amin'ny 2.4mm 4 Layer PCB miaraka amin'ny Blue 4 Layer PCB miaraka amin'ny 2.4mm